Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Qunsul ku xigeen LA oo la ciiday Jaaliyadda California
Qunsul ku xigeen LA oo la ciiday Jaaliyadda California
October 27, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
California-Sabti October 27,2012.Jaaliyada Somalida Ethiopia ee Gobolka California oo la ciiddey Qunsul-xigeenka Qunsiliyada Itoobiya ee magaaladan Los Angeles Mudane Xabiib Muxumed Yuusuf, Salaaddii ciidda oo lagu qabtey Jardiinada Colina Sol ee Magaalada San Diego ayaa ay isugu yimaadeen Dad badan oo isugu Jiray jaaliyada Soomaalida iyo Muslimiin kalaba.
Hadaba Qunsulka iyo Jaalliyada California ayaa salaaddii kadib fursad u helay iney khadka taleefanka kula xidhiidhaan Madaxweynaha Dawlada Degaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamud Cumar Iyo wafdigii uu hoggaaminayey oo ku sugan Magaalada Dubey ee Dalka Imaaraadka Carabta.
Tahniyaddii ciidda uu Madaxweynuhu u soo direy Jaaliyadda ka dib, wuxuu Madaxweynahu uga waramey ujeedada safarkiisa iyo safaraka wafdiga uu hoggaaminayo Madaxweyne ku xigeenka ahna Madaxa Hoggaanka Nabadgelyada iyo Cadaalada DDSI Mudane Abdullahi Yusuf Weerar oo dhawaan u soo amba-bixi doono dalka Mareykanka.
Sidoo kale Guddiga Jaalliyadda oo uu hoggaaminayay Guddoomiyaha ururka Somalida Itoobiya Ingeneer Abdullahi Ibrahim Caydiid (Bucul) wuxuu si qoto dheer uga waramey xaalladihii ay Jaalliyaddan soo martey iyo taabba-galka ururkan cusub oo u adeegi doona danaha Jaaliyadda Somalida Itoobiya ee Gobalka California. Waxayma guddigu cambaaresey dadka nabad-diidka ah ee dacaayadaha raqiiska ah ku soo qora jaaraa’idyada mucaaradka Amxaarada ee ka soo baxa Waddanka gudihiisa iyo shabakadaha websaatyada ee fadhi ku dirirku qurbaha ku qoraan qoro,yibaaxayna in DDSI ay wakhtixaadirkan ka jirto Xukuumad Adag oo Hanatay Masiirka Shacabka Deegaanka.
Dhanka kale Madaxweynuhu wuxuu Jaalliyadda ugu hambalyeyey abaabulkooda iyo doorka taageerada nabadda iyo horumarka gobolka ee ay ka qaateen,islamarkaana Hadh iyo Habeen ugu heelan yihiin Ka Qaybqaadashada Horumarka,Nabadgelyada iyo Maamulka Suuban ee ka Taabo galay DDSI.
Waxaana la illoobi karin ayuu yidhi madaxweynuhu kaallintii ay jaalliyadda ka qaadatey soo dhaweyntii wasiiradii gobalka ka socdey iyo Ururkii ONLF ee nabadda qaatey,isagoon uga ballan qaadey inuu safarkiisa soo socda haddii Allah yidhaahdo inuu soo mari doono California si uu ula kulmo Jaalliyaddan Wadaniyadu ku dheehan tahay.
jaalliyadda ayaa ku boorisey taageertayna Hadalkii madaxweynuhu yidhi ciddii daneyneysa nabadda iyo horumarka in ay si nabad oo waafaqsan dastuurka federaalka iyo kan gobolkaba uu u furan yihiin Albaabada Wadahadalku,Waynuna la wada soconaa 50 sano ee aan xabbadda ku jirney waxay na dhaxalsiisey kuna waynay iyo horumarka iyo xuquuqda aan ku helnay dastuurkan dawladda federaalka ah,iyadoona ay jaalliyaddu ka codsatey inuusan marnaba ka daalin Madaxweynuhu nabad raadinta uu wadey illaa iyo xilligii uu qabtey talada DDSI.
Dhanka kale jaalliyaddu waxaa kale oo ay fursad u heleen iney khadka taleefanka kula xidhiidhaan Madaxa Xafiiska Qurba-joogta ee Deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Axmed Shukri iyo Lataliyaha Madaxweynaha Xagga Arrimaha Qurba-joogtaiyo Maalgashiga Mudane Maxamud Cabdi Shakuur oo ku sugnaa caasimada deegaanka Somaalida Itoobiya ee Jig-Jiga.
Is weydaarsigii hambalyada Ciidda Carrafo kadib, waxay Jaalliyaddu oo uu la joogey Mudane Xabiib Muxumed Yusuf ay ka wada hadleen xidhiidhkan cusub ee wada shaqeynta u dhaxeyn doonta Xafiisyada Qurbajoogta, Qunsiliyada Itoobiya ee Los Angeles iyo Jaalliyada Soomaalida Itoobiya ee Gobolka California.
Ugu dambeyntii runtu waa in la is weydiiyo horumarka iyo xuquuqda aan dastuurka federaalka Itoobiya ku helnay iyo dagaaladdii xabbadda ku saleysnaa iyo waxa ay na dhaxalsiisey (Qaxootinimo, bara-kac, dal-tabyo, dacdarro, iyo gabdhaheenii iney jaariyado aan xuquuq lahayn ka noqdaan deegaamada aan deriska nahay)